माधव नेपालसँग प्रचण्डले भने : ‘प्रधानमन्त्रीसँग अझै कुरा मिलिसकेको छैन’ | Safal Khabar
मंगलबार, १३ असोज २०७७, १० : ४३
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा कुरा मिलिनसकेको बताएका छन् । आफ्नै निवास खुमलटारमा आज बिहान भेट गर्न पुगेका पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई प्रचण्डले ओलीसँगका दिनँहुका भेटवार्ता बारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
तपाईहरुको बसाई के भईरहेको छ ? मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा के प्रगति छ ? वरिष्ठ नेता नेपालले प्रचण्डसँग बिहान खुमलटार पुगेर जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अझै कुरा मिलि नसकेको बताएका हुन् । नेकपा स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र सम्वैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ती गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन असोज ४ र ६ गते दुई दिन नेताहरुले मापदण्ड के बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरेका थिए ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै टिम फेरेर जाने, दुई वर्ष पूरा भएका मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री लैजाने या अहिले रिक्त रहेका मन्त्रालय र केही टुक्राइने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर केही आंशिक अति आवश्यक भएमा मात्र फेरेर जाने विकल्पमा नेकपाको सचिवालयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली तेश्रो विकल्प अर्थात, रिक्त रहेका र टुक्राइने मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नयाँ लैजाने पक्षमा छन् । अहिले अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त छ । भौतिक पूर्वाधार टुक्रयाएर यातायात तथा रेल मन्त्रालय, उर्जाजलस्रोत तथा सिंचाई टुक्रयाएर सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई छुट्टाएर उद्योग मन्त्रालय बनाउने र त्यसमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेर जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बाहेक सबै टिम फेर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रचण्ड भने दुई वर्ष पूरा भएकालाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री काम गर्न सक्ने हैसियत भएकालाई लैजानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर निरन्तरको छलफलमा पनि ओली आफ्नो अडानमा टसमस नभएको र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सहमति जुट्न नसकेको प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई ब्रिफिङ गरेका हुन् । नेपाल निकट स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले ओलीसँगको छलफलमा ओली आफ्नै अडानमा टसमस नदेखिएको ब्रिफिङ नेता नेपाललाई सुनाएका छन् ।
नेताहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा नेकपाभित्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन कुन विधि र मापदण्डका अधारमा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन् । नेता नेपालले भने केही दिन अझै छलफल नै गरेर भएपनि निश्चित विधि र पद्दतीकै आधारमा मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा जोड गर्नुपर्ने बताएर निवास फर्केको स्रोतले बताएको छ ।